“Aza Hadinoina ny Fitiavana Mandray Vahiny” (Hebreo 13:2)
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mixe Mongol Mooré Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
“Aza hadinoina ny fitiavana mandray vahiny.”—HEB. 13:2.
HIRA: 124, 79
Nahoana isika no mety hila hanova ny fiheverantsika ny olona avy any an-tany hafa?
Nahoana no azo lazaina hoe nanahaka an’i Jehovah i Boaza tamin’izy nandray tsara an’i Rota?
Ahoana no ampisehoantsika hoe mandray tsara ny olona avy any an-tany hafa isika?
1, 2. a) Inona no olana mahazo ny olona avy any an-tany hafa? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Mampirisika antsika hanao inona ny Hebreo 13:2, ary inona no fanontaniana mifandray amin’izany?
NIFINDRA tany Eoropa i Osei,  30 taona mahery lasa izay. Avy any Ghana izy, ary mbola tsy Vavolombelon’i Jehovah tamin’izany. Hoy izy: “Vao tonga kelikely aho dia hitako hoe tsy niraharaha an’ahy ny ankamaroan’ny olona. Ny toetrandro koa hafa be. Sambany aho vao nahatsapa an’izany hoe mangatsiaka be, tamin’izaho niala tao amin’ny seranam-piaramanidina. Nitomany aho tamin’izay.” Tsy nahay tsara ny fiteny tany koa i Osei, ka herintaona mahery vao nahita asa tsara. Lavitra ny fianakaviany izy, ka nahatsiaro ho irery ary manimanina ny tany aminy.
2 Ahoana raha ianao no Osei? Inona no tianao hataon’ny olona aminao? Azo antoka fa ho faly ianao raha mandray tsara anao ny olona rehefa tonga any amin’ny Efitrano Fanjakana ianao, na inona na inona volon-koditrao na firenenao. Mampirisika ny tena Kristianina ny Baiboly mba ‘tsy hanadino ny fitiavana mandray vahiny.’ (Heb. 13:2) Hodinihintsika àry hoe: Ahoana no fiheveran’i Jehovah ny olona avy any an-tany hafa? Nahoana isika no mety hila hanova ny fiheverantsika azy ireny? Inona no azontsika atao mba ho tamana ao amin’ny fiangonana misy antsika izy ireny?
NY FOMBA FIHEVITR’I JEHOVAH
3, 4. Araka ny Eksodosy 23:9, ahoana no tokony hataon’ny Israelita tamin’ny vahiny, ary nahoana?
3 Rehefa avy nafahana tany Ejipta ny Israelita, dia nomen’i Jehovah lalàna nampirisika azy ireo ho tsara fanahy tamin’ireo tsy Israelita niaraka taminy. (Eks. 12:38, 49; 22:21) Matetika no sahirana ny olona rehefa tonga any an-tanin’olona, ka nanao zavatra i Jehovah mba ho voakarakara tsara izy ireny. Nilaza, ohatra, izy hoe mahazo mitsimpona ny vokatra navelan’ny mpijinja izy ireo.—Lev. 19:9, 10.
4 Tsy nanery ny Israelita hanaja ny olona avy any an-tany hafa i Jehovah, fa nanampy azy ireo hangoraka azy ireny. (Vakio ny Eksodosy 23:9.) Fantatr’izy ireo tsara mantsy “izay tsapan’ny mpivahiny.” Efa tsy tian’ny Ejipsianina ny Israelita na dia mbola tsy andevo aza. Nihevitra ny Ejipsianina fa ambony noho ny hafa ny firazanany. Tsy tian’izy ireo koa ny fivavahan’ny Israelita. (Gen. 43:32; 46:34; Eks. 1:11-14) Nangidy ny fiainan’ny Israelita tany Ejipta. Tsy tian’i Jehovah ho toy izany anefa ny fiainan’ny olona avy any an-tany hafa tonga teo aminy. Tiany hataon’izy ireo “toy ny teratany” ihany izy ireny.—Lev. 19:33, 34.
5. Inona no hanampy antsika hanahaka an’i Jehovah, ka ho tsara fanahy amin’ny olona avy any an-tany hafa?
5 Mbola tian’i Jehovah horaisina tsara koa ny olona avy any an-tany hafa tonga miara-mivory amintsika. (Deot. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Eritrereto ange ny manjo azy ireny e! Avakavahan’ny olona angamba izy ireny, na mbola tsy hainy tsara ny fitenintsika. Hangoraka azy sy ho tsara fanahy aminy isika raha misaintsaina an’izany.—1 Pet. 3:8.
MILA OVANA VE NY FOMBA FIHEVITSIKA?
6, 7. Inona no manaporofo fa niezaka tsy hanavakavaka ny Kristianina voalohany?
6 Efa tena zatra nanavakavaka ny Jiosy, ka tsy maintsy niezaka niala tamin’izany ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany. Nisy olona vao lasa Kristianina, ohatra, tonga tao Jerosalema, tamin’ny Pentekosta taona 33. Tia sy niahy an’ireny olona avy any an-tany hafa ireny ny Kristianina tao, ka nandray tsara azy. (Asa. 2:5, 44-47) Azon’izy ireo tsara àry ny dikan’ilay hoe “mandray vahiny”, izany hoe “maneho hatsaram-panahy amin’ny olon-tsy fantatra.”
7 Nisy olana nitranga anefa, ary fanavakavahana angamba no nahatonga an’ilay izy. Nitaraina ireo Jiosy miteny grika hoe niharan’ny tsy rariny ireo mpitondratena teo aminy. (Asa. 6:1) Nanendry rahalahy fito àry ny apostoly mba ho voakarakara daholo ny mpitondratena rehetra. Rahalahy nanana anarana grika no notendreny. Izany angamba no hitan’ny apostoly hoe hampilamina an’ilay resaka fanavakavahana.—Asa. 6:2-6.
8, 9. a) Ahoana no mety hahitana hoe mbola manavakavaka isika na mampirehareha antsika ny firazanantsika? b) Inona no tokony hialantsika? (1 Pet. 1:22)
8 Misy vokany be amintsika rehetra ny kolontsaintsika, na dia tsy tsapantsika aza. (Rom. 12:2) Angamba koa misy mpiray tanàna na mpiara-miasa na mpiara-mianatra amintsika tia manambanimbany olona tsy mitovy fiaviana na foko na volon-koditra aminy. Manahaka ny toe-tsain’izy ireny ve ianao? Ary raha ihomehezan’ny olona ny firenena niavianao, ohatra hoe manitatra be ry zareo rehefa miresaka momba ny fanao any aminareo? Tezitra be ve ianao?
9 Nisy fotoana, ohatra, nanavakavaka an’ireo tsy Jiosy ny apostoly Petera. Niezaka tsikelikely anefa izy mba tsy hanana an’izany toe-tsaina izany intsony. (Asa. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Raha tsapantsika koa hoe somary manavakavaka isika na mampirehareha antsika ny firazanantsika, dia tokony hiezaka mafy isika mba hiala amin’izany. (Vakio ny 1 Petera 1:22.) Tsara raha tadidintsika fa tsy misy mendrika ny hovonjena isika ary tsy lavorary daholo, na inona na inona firenentsika. (Rom. 3:9, 10, 21-24) Tsy misy tokony hieritreritra àry isika hoe ambony noho ny hafa. (1 Kor. 4:7) Tokony hanahaka ny toe-tsain’ny apostoly Paoly isika. Hoy izy tamin’ireo voahosotra toa azy: ‘Tsy vahiny na mpivahiny intsony ianareo, fa anisan’ny ankohonan’Andriamanitra.’ (Efes. 2:19) Hahavita hitafy ny toetra vaovao isika, raha miezaka mafy mba tsy hanavakavaka an’ireo olona tsy mitovy fiaviana amintsika.—Kol. 3:10, 11.
ASEHOY FA TSARA FANAHY IANAO
10, 11. Inona no mampiseho fa nanahaka ny fiheveran’i Jehovah ny vahiny i Boaza?
10 Nanahaka ny fiheveran’i Jehovah ny vahiny i Boaza. Rehefa nankany an-tsaha izy mba hijery an’ireo mpiasany nijinja ny variny, dia nahita vehivavy avy any Moaba niasa mafy nitsimpona an’izay navelan’ireo mpijinja. Rota no anarany. Zony ny nanao an’izany nefa niera izy talohan’izay. Henon’i Boaza izany, ka navelany hitsimpona hatreny anelanelan’ny amboara mihitsy izy.—Vakio ny Rota 2:5-7, 15, 16.
11 Hita tamin’ny resak’izy ireo taorian’izay hoe tena niahy an’i Rota i Boaza. Fantany mantsy fa sahirana i Rota satria vahiny. Nasainy niaraka tamin’ireo tovovavy mpanompony izy, amin’izay tsy hadaladalain’ireo lehilahy niasa teny an-tsaha. Nomeny sakafo sy rano ampy tsara mihitsy aza izy, toy ny nataony tamin’ny mpiasany rehetra. Sady nahantra i Rota no avy any an-tany hafa, nefa tsy nanambany azy i Boaza fa nampahery azy.—Rota 2:8-10, 13, 14.
12. Inona no ho vokany raha tsara fanahy amin’ny olona avy any an-tany hafa isika?
12 Nanohina ny fon’i Boaza ny nahita hoe tsy nahafoy an’i Naomy rafozany i Rota fa tia azy foana. Faly koa izy fa lasa mpanompon’i Jehovah i Rota. Toy ny hoe ‘tonga nitady fialofana teo ambany elatr’i Jehovah Andriamanitry ny Israely’ izy. Nanahaka an’i Jehovah àry i Boaza ka tsara fanahy taminy. (Rota 2:12, 20; Ohab. 19:17) Raha tsara fanahy koa isika, dia mety hanampy “ny karazan’olona rehetra” hahalala ny fahamarinana sy hahatsapa hoe tena tia azy ireo i Jehovah.—1 Tim. 2:3, 4.
Mandray tsara an’ireo vaovao tonga mivory ve isika? (Fehintsoratra 13, 14)
13, 14. (a) Nahoana isika no mila miezaka handray tsara an’ireo avy any an-tany hafa tonga mivory? b) Inona no afaka manampy anao hiresaka amin’ireo tsy mitovy kolontsaina aminao?
13 Tsara fanahy amin’ireo avy any an-tany hafa isika, raha mandray tsara azy rehefa tonga mivory izy. Menamenatra sy mitokantokana mantsy izy ireny indraindray. Mety hihevitra ny tenany ho ambany noho ny olona tsy mitovy firazanana na firenena aminy koa izy, noho ny fomba nanabeazana azy na ny fari-piainany. Isika àry no mila manatona azy, ka mampiseho fa tena mitady izay hahasoa azy. Raha misy amin’ny fiteninao ny programa JW Language, dia ampiasao ilay izy mba hianarana fiarahabana amin’ny fitenin’ilay olona.—Vakio ny Filipianina 2:3, 4.
14 Mety hahatsiaro ho hafahafa ianao rehefa miresaka amin’ireo tsy mitovy kolontsaina aminao. Inona no afaka manampy anao? Azonao atao ny miresaka momba anao. Mety ho hitanao amin’izay hoe ny zavatra itovizanareo no betsaka kokoa noho ny zavatra tsy itovizanareo. Ho hitanao koa hoe samy misy maha tsara azy sy maha ratsy azy ny kolontsaina rehetra.
AMPIO NY REHETRA MBA HO TAMANA
15. Inona no hanampy anao hahay hifandray amin’ny olona avy any an-tany hafa?
15 Te hanampy ny hafa ho tamana ao amin’ny fiangonana misy anao ve ianao? Eritrereto àry hoe: ‘Raha mankany an-tany hafa aho, inona no tiako hataon’ny olona amiko?’ (Mat. 7:12) Manàna faharetana amin’ny olona avy any an-tany hafa, satria mbola miezaka ho zatra kolontsaina vaovao izy. Mety tsy ho azonao amin’ny voalohany ny fomba fisainany na ny zavatra ataony. Aleo anefa manaiky fotsiny hoe izay no maha izy azy, toy izay hanery azy hanaraka ny kolontsainao.—Vakio ny Romanina 15:7.
16, 17. (a) Inona no azontsika atao mba hifandray kokoa amin’ny olona avy any an-tany hafa isika? b) Ahoana no azo anampiana an’ireo nifindra monina, ao amin’ny fiangonantsika?
16 Azo atao koa ny mianatra momba ny kolontsaina sy ny firenen’ireo avy any an-tany hafa. Ho mora kokoa aminao amin’izay ny mifandray amin’izy ireny. Misy olona avy any an-tany hafa ve ao amin’ny fiangonanareo na ao amin’ny faritaninareo? Azo atao ny mikaroka momba ny kolontsain’izy ireny rehefa manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Hifandray kokoa amin’izy ireny koa ianao raha manasa azy hisakafo any an-tranonao. ‘Nanokatra ny varavaran’ny finoana ho an’ny hafa firenena’ i Jehovah. Tsy mba tokony hanokatra ny varavarantsika ho an’ny “mpiray finoana amintsika” avy any an-tany hafa koa ve isika?—Asa. 14:27; Gal. 6:10; Joba 31:32.
Miezaka ho tsara fanahy amin’ny olona avy any an-tany hafa ve ianao? (Fehintsoratra 16, 17)
17 Mety hahalala fianakaviana nifindra monina ao amin’ny tanintsika isika. Raha manokana fotoana hiarahana amin’izy ireny isika, dia ho hitantsika ny ezaka ataony mba ho zatra ny kolontsaintsika. Mety ho hitantsika koa hoe inona no azontsika atao mba hanampiana azy hahay ny fitenintsika. Azo atao koa ny manoro azy toerana fitadiavana asa na trano mba hahitany trano na asa mety aminy. Mety hisy vokany be amin’ireo mpiray finoana ny ezaka toy izany.—Ohab. 3:27.
18. Ahoana no azon’ireo nifindra monina anahafana an’i Rota?
18 Tokony hanao izay azony atao koa anefa ireo nifindra monina, mba ho zatra an’ilay kolontsaina vaovao. Modely tsara amin’izany i Rota. Nanaja ny fanaon’ny olona tao amin’ilay firenena vaovao nisy azy izy, ka niera aloha vao nitsimpona salohim-bary. (Rota 2:7) Tsy nieritreritra izy hoe zony izany, ka tsy maintsy mamela azy hanao an’izany ny olona. Tonga dia nankasitraka ny soa natao taminy koa izy. (Rota 2:13) Raha manana toe-tsaina tsara hoatr’izany ireo nifindra monina, dia azo inoana kokoa hoe hanaja azy ny olona eo an-toerana sy ny mpiray finoana aminy.
19. Nahoana isika no tokony handray tsara an’ireo olona avy any an-tany hafa?
19 Faly isika satria tena tsara fanahy i Jehovah, ka avelany handre ny vaovao tsara ny olona avy amin’ny firenena rehetra. Angamba tsy afaka nianatra Baiboly na nivory ny olona sasany, tamin’izy mbola tany amin’ny taniny. Lasa afaka mifanerasera amintsika anefa izy rehefa atỳ amin’ny tanintsika. Tokony hanampy azy àry isika, amin’izay izy tsy hahatsiaro tena ho vahiny. Mety ho kely ihany ny vola na zavatra azontsika omena azy ireny. Tia azy ireny toa an’i Jehovah anefa isika raha tsara fanahy aminy. Enga anie isika “hanahaka an’Andriamanitra”, ka hiezaka mafy hahay handray vahiny.—Efes. 5:1, 2.